China Stamping robot maka akpaka pịa mmepụta ahịrị emeputa na Supplier |Yunhua
Robot ịgbado ọkụ Yooheart 1450mm
obere 850mm 6 axis njikwa robot
Ebe ọrụ ịgbado ọkụ 7 Axis Robotic Arc
8 Axis Robotic Welding Works with Two Positioner
HY1010A-143 bụ 6 axis njikwa robot nke enwere ike iji maka njikwa, palletizing na depalletizing.
N'ebe a, a na-eji ya maka ọrụ stamping maka igwe pịa.
ọ bụ atụmatụ dị ka n'okpuru:
-Mgbanwe: 6 DOF;
- Nnukwu iru na ibu: 1430mm, ibu 10kg;
-Stable na Ogologo akwụkwọ ikike: 2 afọ;
HY1010A-143 bụ 6 axis njikwa robot nke enwere ike iji maka njikwa, palletizing na depalletizing.N'ebe a, a na-eji ya maka ọrụ stamping maka igwe pịa.N'ihi na ụfọdụ pụrụ iche ọnọdụ, akụkụ ga-agbanwe ọzọ pose iji izute igwe chọrọ, Ya mere ngwọta na-arịọ maka ọzọ DOF (ogo nke nnwere onwe) nke robot.1430mm ogwe aka iru na 10kg ibu nwere ike izute nnọọ ọtụtụ ụdị nke pịa igwe.
PARAMETER & nkọwapụta ngwaahịa
Axis Ibu kacha Nkwaghari Ike gburugburu Ibu Nwụnye IP larịị
6 10KG ±0.08 3kv 0-45 ℃ Enweghị iru mmiri 170kg Ala / mgbidi / ụlọ IP65
Oke ngagharị J1 J2 J3 J4 J5 J6
± 170° +85°~-125° + 85°~-78° ± 170° ± 115°~-140° ± 360°
Ọsọ ọsọ J1 J2 J3 J4 J5 J6
Robot nwere 1 axis mpụga
ngwa ịgbado ọkụ
Foto nke 2
Akụkụ akpaaka Robot
Oghere ịgbado ọkụ gburugburu
Mbupu na Mbupu
Ụlọ ọrụ Yunhua nwere ike ịnye ndị ahịa usoro nnyefe dị iche iche.Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ụzọ mbupu site n'oké osimiri ma ọ bụ ikuku dị ka mkpa ngwa ngwa siri dị.Ihe nkwakọ ngwaahịa YOOHEART nwere ike izute ihe achọrọ n'oké osimiri na ikuku.Anyị ga-akwado faịlụ niile dị ka PL, asambodo mmalite, akwụkwọ ọnụahịa na faịlụ ndị ọzọ.Enwere onye ọrụ nke isi ọrụ ya bụ ijide n'aka na enwere ike ịnyefe robot ọ bụla n'ọdụ ụgbọ mmiri ndị ahịa n'enweghị nsogbu n'ime ụbọchị ọrụ 40.
Mgbe ọrụ ire ere
Onye ahịa ọ bụla kwesịrị ịma robot YOOHEART nke ọma tupu ha azụọ ya.Ozugbo ndị ahịa nwere otu roboti YOO HEART, onye ọrụ ha ga-enwe ọzụzụ ụbọchị 3-5 n'efu na ụlọ ọrụ Yunhua.A ga-enwe otu Wechat ma ọ bụ WhatsApp, ndị ọrụ nka anyị na-ahụ maka ọrụ ire ere, eletriki, ngwa ngwa, sọftụwia, wdg, ga-abanye, ọ bụrụ na otu nsogbu emee ugboro abụọ, onye ọrụ nka ga-aga ụlọ ọrụ ndị ahịa iji dozie nsogbu ahụ. .
Q. Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti 6 axis stamping robot na 4 axis stamping robot?
A. Ha abụọ bụ nke stamping robot maka igwe igwe, ma ọ bụrụ na igwe akuko gị chọrọ ka ọ dịkwuo, 6 axis robot ga-aka mma.Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ike họrọ 4 axis stamping robot.
Q. Robot ole stamping ga-eji maka ahịrị mmepụta stamping zuru oke?
A. nke ahụ dabere, na-abụkarị otu igwe igwe na-achọ otu robot stamping.
Ajụjụ. Ndị ọrụ ole ka a ga-achọ maka ahịrị stampụ?
A. 1-2 onye ọrụ maka nkeji iri nke rọbọt stamping.
Q. Enwere m ike izipu nwoke m na ụlọ ọrụ gị maka ọzụzụ?
A. n'aka, ị ga-enwe ọzụzụ n'efu na ụlọ ọrụ anyị.A na-anabatakwa gị mgbe niile ebe a.
Q. Ị gụchara akpaaka stamping mmepụta akara n'elu oké osimiri ahịa?
A. Ugbu a, anyị emeghị.
Nke gara aga: Robot stampụ
Osote: Robot na-emepe emepe na Robot na-akụda mmụọ
Abb njikwa Robot
Robot ejikwa akpa
Robot ejikwa iko
Ijikwa cell Robot
Na-ebu ma na-ebutu robot maka igwe lathe CNC
Họrọ ma tinye robot maka obere akụkụ nkuzi r ...